Ama-Squad Hacks ats Ukukopela, i-Aimbot, i-ESP, iWallhack - iGamepron
Dlala i-Squad ngendlela obukade ufuna ngayo! Thola ukufinyelela ku-Squad Aimbot ehamba phambili, iWallhack, i-ESP, nokunye okuningi khona lapha eGamepron. Hack indlela efanele ngamathuluzi ethu!
Uyacelwa ukuthi uqaphele: Ngaphambi kokuthi uthenge ama-Squad hacks ethu, qiniseka ukuthi ithuluzi ofuna ukulithenga lisanda kuvuselelwa noma lisasebenza ku-inthanethi. Ngenkathi sihlala sibuyekeza amathuluzi ethu, kukhona ukubambezeleka kwesikhathi sokulethwa kwezinye izimo; ngenkathi kuvame ukushesha, kungathatha futhi amahora ambalwa. Onke amathuluzi ethu akhiyiwe nge-HWID, okusho ukuthi ungawasebenzisa kuphela kukhompyutha eyodwa - qiniseka ukuthi ikhompyutha yakho iyahambisana nawo wonke amathuluzi ethu ngaphambili. Akukho ukubuyiselwa kwemali okuzonikezwa uma usubonile ukhiye womkhiqizo!
Okukhethiwe kwethu squad Hacks
Thenga squad Hacks in 4 izinyathelo
Khetha i-Squad kuma-hacks amaningi womdlalo esiwanikeza abasebenzisi bethu lapha eGamepron
Khetha izici zokugenca ze-Squad ezihlangabezana nezidingo zakho kangcono, sinakho konke lapha eGamepron
Yenza inkokhelo yakho usebenzisa i-100% processor ephephile futhi ekhethekile kusuka ku-Gamepron!
Lapho usukhokhele ukhiye wakho womkhiqizo, ungafinyelela futhi ulande ama-Squad hacks
Kungani ama-Gamepron Squad hacks?
I-Squad ngumdlalo othanda abanesibindi, yingakho abadlali abahle kakhulu yilabo abebedlala abacibishelayo isikhashana. Uma usanda kungena kohlobo noma ungaqondi ukuthi iSikwati sisebenza kanjani ngokuphelele, kuzoba nzima ukuhlala uncintisana. Ama-hacks afakwe ngokugcwele alolu hlobo akulula ukuhlangabezana nawo, ikakhulukazi uma unentshisekelo kuma-Squad hacks - isizathu sokuthi i-Gamepron ibhekwe njengomhlinzeki we- # 1 wama-hacks online ukuhluka kwethu. Asigxili ekukhohliseni okukodwa noma sinikeze ukwelashwa okukhethekile kunoma iyiphi imidlalo yethu, futhi ungasho lokho ngokusebenzisa ukugenca kwethu kweQela. Ngenkathi isisekelo somdlali sikhula ngokushesha, i-Squad ngumdlalo omusha osakhiwa maqondana ne-buzz yawo. Yize abanye abahlinzeki be-hack bengazithatheli ngokwabo ekudaleni i-Squad hack, i-Gamepron imayelana nokwenza izinto ezintsha!
Ithimba lonjiniyela esisebenza nalo lisondelene, lisinika umuzwa wokuthi abanye abahlinzeki be-hack ngeke bakwazi ukuletha. Lapho ufuna ukwazi ukuthi ubeka imali yakho endaweni efanele, i-Gamepron ukuphela kwensizakalo ezokwenza kahle kuwe. Amathuluzi ethu enziwa ngeminye yemicabango ekhanyayo embonini yokugenca, futhi kuvunyelwe i-Gamepron ukugcina idumela esiziqhenyayo ngalo. Ama-squads hacks nokukhohlisa okungeke kubeke umsebenzisi engcupheni nakho kufanele ube nakho, futhi ukuphepha yilokho esikwenza kangcono lapha! Ungafaki ikusasa le-akhawunti yakho engcupheni ngokugenca ngamakhohlisi weqembu eliphansi.
Ukulungisa amasethingi akho ngaphakathi komdlalo akuseseyona inkinga uma ukhohlisa ngeGamepron ngoba imenyu yethu enembile yomdlalo yenza ukulungiswa kube inqubo elula. Awudingi ukuvala ngokuphelele isicelo ukuze wehlise ijubane le-Squad aimbot yakho, ungavele uvule imenyu yomdlalo bese uyenza ngemizuzwana embalwa. Amandla okuguqula izici zokugenca kwe-Squad on (and off) ku-game kuyinzuzo enkulu kubadlali, njengoba ungahlala ukhubaza ukukopela futhi udlale ungenacala uma izinto zingahambi kahle.
Imikhawulo ayisiyona into uma ukhetha ukukopela ngeGamepron, futhi sikunikeza zonke izici ezidingekayo ukushintsha umfutho wawo wonke umdlalo ohlanganyele kuwo. Awudingi ozakwabo abahle kakhulu ukuthola umhlane wakho, ngoba wethu Ukugenca kweqembu lesikwenisi kuzokwanela noma yikanjani.
Our squad Hack Izici
Isikwati Player ESP
Sebenzisa ithuluzi lethu le-Squads Player ESP ukubona ukuthi izitha zakho zitholakala kuphi ngaso sonke isikhathi, zikuvumela ukuthi uhlale endaweni enenzuzo.
Imininingwane ye-Squad Player ESP (Igama, imigoqo yezempilo, ibanga)
Sebenzisa i-squads Player Information ESP hack ukuze ufunde kabanzi mayelana nezinhloso zakho (njengamagama abo, ezempilo, ngisho nebanga labo kuwe).
Into Yesikwele ESP enezihlungi
Into ESP ngesinye isici esiwusizo esizokwazisa indawo yanoma iyiphi into oyikhethayo (usebenzisa umsebenzi wokuhlunga).
Ama-Aimbots angasetshenziselwa ukuqinisekisa ukunemba kokudutshulwa kwakho, akunikeze ithuba elingcono lokuwina izibhamu zakho ku-Squad.
Ithrekhi ye-Squad Bullet (isebenza ngamabanga amafushane naphakathi)
Landelela izinhlamvu zakho ngenkathi uzibandakanya ezimpini ezimfishane ukuya phakathi, okukuvumela ukuthi ubone ukuthi ngabe ilitshe lakho likhishiwe.
Squad bone & aim ukhiye okulungisekayo
Lungisa i-aimbot yethu yeSikwele ngendlela othanda ngayo ngokusebenzisa ithambo lethu bese uhlose izinketho zokhiye ezilungisekayo! Akudingeki ukuthi ulungiselele izilungiselelo zefektri.
Ukuhlolwa okubonakalayo kwe-squad aimbot
Amasheke abonakalayo angasetshenziselwa ukuqinisekisa ukuthi i-Squad aimbot yethu ayikhiyi ezitheni ezingabonakali, okukuvumela ukuba ugcine ubukhona obungenacala.
Isinxephezelo seSquad Recoil
Ukubuyisa kungasuswa emdlalweni ngokuphelele nge-Squad Recoil Compensator! Awusoze waphuthelwa esinye isibhamu ngenxa yokubuyela emuva nethuluzi lethu.
Izexwayiso zesitha seqembu lesixwayiso
Uma isitha siqonde kuwe noma siseduze, ungasebenzisa isici sezexwayiso ukubonisa umlayezo owenziwe waba ngowakho esikrinini sakho.
Imodi ye-squad super jump (akukho monakalo wokuwa lapho yenziwe yasebenza)
Imodi ye-Super Jump izovumela abasebenzisi be-Gamepron ukuthi bagweme ukuthatha umonakalo wokuwa ngenkathi bedlala i-Squad, ukuze weqe ukusuka endaweni ephezulu kakhulu futhi ungaphumi kuyo.
Ukuze ube ngumdlali we-Squad ongcono kakhulu, uzodinga ukufinyelela kumathuluzi amahle kakhulu. I-Gamepron ibingumhlinzeki ohola phambili wemboni wama-hacks isikhathi eside, futhi i-Squad cheat yethu ilandela lo mkhuba kahle kakhulu. Kokubili abasebenzisi be-novice kanye ne-veteran hack, ekugcineni ungasebenzisa ukukopela kwe-Squad okungeke kufinyelele kulokho okulindele! Sebenzisa imali yakho ngokuhlakanipha futhi uthenge ukhiye womkhiqizo weHack yilelo elaligqokwe namuhla.
AmaHack Squad adumile futhi aphambe
I-Squad ESP neWallhack
Amanye ama-Squad Hacks futhi aphambe
Ama-hacks e-Squad adumile akakaze kube lula ukuthola lokhu, futhi yilokho okwenza iGamepron ikhetheke kangaka. Uthenga kangaki ukufinyelela kokukhohlisa, kuphela ukubona ukuthi bekungafanele? I-Gamepron ayisoze yadumaza, futhi akunandaba ukuthi yimuphi umdlalo ofuna ukukhohlisa kuwo! Ama-hacks ethu e-Squad afaka zonke izici ezithandwa kakhulu, njenge-Squad ESP, i-Aimbot, iRadar, nokunye okuningi okungeziwe okumangazayo. Ufanele amathuluzi amahle kakhulu, futhi ngocwaningo oluncane, uzobona ukuthi kungani i-Gamepron ingumhlinzeki we- # 1 wama-hacks online. Ukukopela kwesikwati kwalobu bukhulu akuveli kaningi, ngakho-ke qiniseka ukuthi awulahlekelwa yithuba lakho lokukhula njengomdlali.
Ukukopela kubukelwa phansi kweminye imibuthano, kepha abanye abantu bazokutshela ukuthi kujwayelekile. Labo abadlala ku-PC kungenzeka ukuthi baqaphele ukwanda kwabagengebi, futhi uma ungeke ubashaye, uzoba ngcono ngokuzijoyina!
I-Gamepron ingenza inqubo yokuqalisa ibe lula ngokukunikeza ukufinyelela kuma-hacks amahle kakhulu e-Squad atholakala ku-intanethi, ngakho-ke ungakhathazeki uma ubheke ukungena okokuqala ngqa. Sonke bekufanele siqale endaweni ethile, ngisho nensizakalo yethu engenacala! I-Squad aimbot ekhiqizwe lapha eGamepron ifakwe izinto zobuciko zesimanje, zonke ezazenzelwe ukukuguqula ube ngumshini wokubulala. Ungasusa ukubuyela emuva futhi ujikeleze ukwenza isibhamu sakho sinembe kakhudlwana, bese ukhetha ukuthi iyiphi ingxenye yomzimba i-Squad aimbot yethu ezobhekisa kuyo. Ngokusobala isici esibaluleke kakhulu sanoma yikuphi ukugenca kungaba yi-aimbot, futhi nakanjani asinqumanga noma yimaphi amakhona nge-Squad aimbot yethu!
Zizwe amandla oMbuthano we-FOV obheke izitha njengoba zingena kuwo, ungakhetha nokushintsha usayizi we-FOV Circle yakho uma ungathanda! I-Lock-On Target ilungele uma unamehlo esitha, futhi awufuni ukubayeka babaleke.
Sebenzisa ukuqhekeka kwethu kwe-Squad kanye nezinketho ze-ESP ngaphakathi kokuzizwa ngeqembu lakho, kanye nezindawo zesitha. Ungamaka indawo yabalingani bakho futhi ubone ukuthi bayaphi ngokunika amandla i-Player ESP, unikeze abasebenzisi ithuba lokubona bobabili ababambisene nabo nezitha ngezindawo eziqinile. Ama-Wallhacks abe yisidingo emhlabeni wokugenca, futhi iSquad bekungeke kwehluke - umdlalo unamaqembu abantu abangama-50 abalwa wodwa, ngakho-ke kunengqondo ukusebenzisa ukukhohlisa kwethu kwe-Squad ESP! Akudingeki ukuthi uzikhawulele kubadlali nje, ngoba kunenketho ye-Item ESP efakiwe!
Ungabona iziqhumane, izikhali, nezinye izinto ezibalulekile usebenzisa i-ESP hack yethu. Ungazami ukuhlola inhlanhla yakho ngezinye izinketho, ngoba lokho kuzokwenza ukuthi uvinjelwe! Hack nabangcono kubo futhi uthenge ukufinyelela Squad yethu Hack namuhla.
Isici sethu se-Footprint sisetshenziselwa ukugcina abadlali bazi uma kuziwa endaweni yesitha. Ungakubhangqa nokugenca kwe-ESP ukuthola umbono ophelele wemephu, yize umsebenzi weFootprint uzosebenza ngokuhlukile. Uzobona izinyathelo ezizoholela ngqo ezitheni, zikunike ithuba lokucabanga ukuthi uzosisingatha kanjani lesi simo. Akunandlela yokuthi ngeke uzishaye izitha zakho lapho kudutshulwana khona lapho usuzifinyelele, njengoba isici se-High Damage sizogxila kuphela ezingxenyeni ezibulalayo zomphikisi wakho. Ukwenza umonakalo omningi kunabantu obhekene nabo kunenzuzo ngezizathu ezisobala, njengoba kudutshulwe ngokudutshulwa, ngeke bakwazi ukuhambisana nomsebenzisi weGamepron.
Ibanga yisici esihle sokunika amandla kulesi simo ngoba ungasebenzisa i-Footprint ukuthola isitha ne-Distance ukubona ukuthi useduze kangakanani.
Ukulandela nje iqoqo lezinyawo ngokungaboni akulungele isigebengu, yingakho isici seBanga sizokwazisa uma ingozi isenzeka, lokho kumane nje kuyisiqalo sezici zethu ezingeziwe nokho! Kunezinye izinto eziningi ezifakiwe ngaphakathi kweHackad Hack yethu ezokwenza ukuwina kube lula kakhulu kunakuqala, ikakhulukazi uma usaqala ukudlala i-Squad. Ukungena ezimpini ezishubile kuyinto ejwayelekile eSikwatini, kepha ukuphuma phambili kulula ukusho kunokukwenza. Udinga izici ezifanele ukuze ube ngumpetha weqiniso! Isibonelo, isici se-Unlimited Stamina sikwenza ukwazi ukugijima ngendlela ongathanda ngayo, ukumboza umhlaba ongaphezulu kunabanye.
Lapho ufunda ukuthi ungasebenza kanjani nokugenca kwe-Squad esikwenze ngokukhululekile, akekho umuntu eMhlabeni ongakuvimba ekuwineni. Uzonikezwa ne-HWID Spoofer lapho uthenga ukhiye womkhiqizo we-Squad hack yethu, futhi ungawusebenzisa ngenkathi udlala ngemodi yesikrini esigcwele.
Ama-Squad Hacks Imibuzo
Kungani iqembu lethu le-Hacks
Kungani iqembu lethu le-Aimbot
I-aimbot yethu yeSikwele inezici eziningi kunezindlela eziningi, futhi lokho kuphela kufanele kwanele ukuqinisekisa ukuthenga. Uzohlomula njalo ngokuba nenhloso engcono kunezitha zakho, futhi uma usebenzisa i-Squad aimbot yethu, kuzohlala kunjalo! Ukulahlekelwa yizibhamu yinto yakudala lapho i-Squad aimbot yethu inikwe amandla, ngakho-ke joyina umndeni weGamepron uthenge ukhiye womkhiqizo namuhla.
Kungani i-Squad yethu i-ESP
Ukugenca kwethu kwe-Squad ESP kuzodalula ngisho nabaphikisi abathobeke kakhulu emdlalweni, okumele ukwenze nje ukukunika amandla futhi uzobona konke. Ukusuka kubadlali kuya ezintweni, ungasebenzisa i-Squad ESP hack yethu ukukhomba lezi zinto ukude - awudingi ukuzibeka engcupheni yokubona ukuthi konke kutholakala kuphi enkundleni yempi.
Kungani Squad Wall yethu Hack
Ama-Wallhacks ngeke adalwe alingane, futhi uzokwazi ukuthi nakanjani uma usuzamile i-wallhack etholakala eGamepron. I-Squad ngumdlalo osuvele unamathuba ayingozi anele njengoba unjalo, ngakho-ke ungahle uthande ukuwabeka umkhawulo ngokusebenzisa i-wallhack yethu ukubona izitha ezindaweni eziqinile (ngaphambi kokungena kulelo gumbi uwedwa!). Yiba umdlali ongcono nge-Squad wallhack yethu!
Kungani iqembu lethu le-NoRecoil
I-Recoil isebenza kakhulu kumaseva we-Squad, njengoba kuyi-shooter eyiqiniso ezohlola ukunemba kwakho ngezindlela ezingaphezu kweyodwa. Sebenzisa isici sethu seNoRecoil (okunye okwaziwa ngokuthi yi-Recoil Compensator) ukuyisusa emdlalweni wakho ngokuphelele! Kungani uzihlupha ngokubhekana nalokho kubuyisa okubuhlungu lapho ungavele usisuse esithombeni.
Ungawalanda kanjani ama-hacks amahle kakhulu e-Squad?
Ama-hacks amahle kakhulu e-Squad online angatholakala khona lapha, njengoba i-Gamepron inikezelwe ekukhiqizeni ama-hacks amahle iminyaka. Sikwazile nokuhlehlisa inqubo yokulanda nokufaka futhi, sinikeza abasebenzisi be-novice ithuba elingcono lokusebenzisa ngempumelelo la mathuluzi (sithembe, akunakwenzeka ukuphambanisa lokhu!). Landa ama-hacks amahle kakhulu e-Squad namuhla ngokuthenga ukhiye womkhiqizo ku-Gamepron!
Kungani ama-Squad hacks akho ebiza kakhulu kunamanye
Amanani entengo yamaqembu ethu e-Squad ahlobene nokukhethekile kokukhohlisa kwethu, kanye nezinga lezokuphepha elivezwe lapha eGamepron. Ngeke ukuthole ukuphepha okunjengalokhu kwenye indawo, njengoba konke ukukhishwa kwethu kungatholakali! Akukaze kube nokuqukethwe okunonya okufihliwe kumathuluzi ethu, nokuyinto abahlinzeki abaningi abanomthunzi abayenzayo (siyabonga, sinedumela njengoba beza lapha eGamepron).
Ungakhetha ukuthi ungathanda ukufinyelela isikhathi esingakanani ukungena kweqembu lethu, konke okufanele ukwenze ukuthenga okhiye bakho bomkhiqizo ngokufanele. Sinemikhawulo yesikhathi esebenzela izidingo zawo wonke umuntu, njengoba ungathenga ukhiye womkhiqizo wosuku olungu-1, neviki elilodwa, nenyanga engu-1. Khetha ukuthi ungathanda ukugenca isikhathi esingakanani ngeGamepron, futhi uma uphelelwa yisikhathi, ungavele uthenge omunye ukhiye!
Awesome squad Hack Izici